Qalab lagu raadsado nooca qoraalka aad raadineysay | Abuurista khadka tooska ah
Qalab lagu raadiyo nooca qoraalka aad raadineysay
Haddii aad tan akhrinaysid waa sababta oo ah inaad ka tirsan tahay koox naqshadeeyayaal ah in mararka qaarkood noloshooda ay bilaabeen inay weydiiyaan su'aalo ku saabsan nooca isha iyo nooca loo adeegsaday buug-yaraha, kaarka ama calaamadda.
Si aan wax yar kaaga caawino arrintan, maanta ayaan ku tusinaynaa aaladaha qaarkood taasi waxay kaa caawin doontaa inaad aqoonsato noocyada ay sawirradu leeyihiin si aad u ogaatid nooca farta uu adeegsanayo sidaasna looga tegayo inaad adigu isticmaasho.
Qalabka lagu raadsado nooca qoraalka aad u baahan tahay
Maaddaama ay jiraan codsiyo noo oggolaanaya cadee kala duwanaanta midabbadaWaxa kale oo jira aalado naga caawin kara sidii loo aqoonsan lahaa font.
Marar badan waxaan u janjeedhnaa inaan ka gudubno muhiimadda runta ah ee far-qorista iyo inaan ku dhammaano mid ka mid ah xulashada ikhtiyaarrada caadiga ah, laakiin qaab qorid wanaagsan ayaad ku guuleysan kartaa waxyaabo waaweyn waxaadna beddeli kartaa aragtida uu qof ka haysto dokumenti ama shaqo. Dhamaadka wax walba, waa wax aad u muhiim ah in kastoo ay ka kooban yihiin, naqshadeynta ayaa sidoo kale saameyn doonta in boggaagu guuleysto ama soo bandhigidaadu ay saameyn togan ku yeelato ka soo qeyb galayaasha, sidaa darteed xulashada qaab qoraal wanaagsan oo tilmaamaya shakhsiyadeena ayaa noo keeni karta faa'iidooyin badan.
Adduunyada internetka waxaan ka heli karnaa kuwo badan bogag na siiya noocyo kala duwan oo noocyo bilaash ah, laakiin markaan ka helno far jumlad joornaal, sawir ama bog kale, had iyo jeer ma fududa in la go'aamiyo midka la isticmaalay. Sida aan arki karno, go'aaminta font-ka ma ahan shaqo fudud, xitaa in ka sii badan haddii aan nahay kuwo bilow ah oo aan aqoon badan u lahayn mawduuca, laakiin xaaladdan teknolojiyaddu way na caawin kartaa wax yar.
Hadda waxaan ka hadli doonaa qalab MaxaaFontIs, tani gabi ahaanba waa bilaash waxayna noo ogolaaneysaa inaan si fudud u aqoonsanno noocyada xarfaha sawir ka qaad farta aan rabno inaan ogaannoKadib sawirkan ayaan u geyn doonnaa serverka qaabka GI, PNG ama JPG ka dib marka aad sawirka ka baaraandegto jawaabaha ayaad ku siin doontaa
Shardiga keliya ee ay codsadaan waa kaas sawirku kama badna 1,8 megabyte iyo faa'iido ayaa ah inaan u kala shaandheyn karno natiijooyinka qaab-qorid bilaash ah ama lacag leh.
Qalab kale ayaa ah - Aqoonsiga, laakiin tani sax maaha sidii tii hore, boggan wuxuu ku shaqeeyaa adigoo su'aalo ka weydiinaya isha, ka dibna ku siinaya ilo la mid ah kan aad raadineyso. Boggu wuxuu leeyahay sawirro si aan nafteenna u hanuunino oo aan u ogaanno kan ay tahay font la doonayo.
Laakiin dhinaca kale waa Maxay, tani waxay leedahay nidaam la mid ah kii ugu horreeyay, waa inaan sawirka ku shubnaa BMP, JPEG, GIF ama TIFF, iyada oo aysan ka weyneyn 25 xaraf, markaa qalabku wuxuu falanqeynayaa warqad warqad si loo arko haddii fontku sax yahay.
Waxaan sidoo kale dooran karnaa NoocaDNA, taas oo lamid ah tii hore oo xaraf xaraf ahaan loogu xusho, laakiin tani waxay na weydiin doontaa inaan xusho xaraf kasta si aan awood ugu yeelano inaan si aamin ah u aqoonsano in warqada aysan laheyn waxyaabo badan oo la xushay sidaasna looga fogaado khaladaadka kujira sawirka.
Raadi Fontkeyga waa codsi kumbuyuutar oo naga caawin kara helitaanka noocyada, kani waa codsi lacag la bixiyo laakiin wuxuu leeyahay ikhtiyaar demo ah oo naga caawin kara inaan ogaanno sida ay u shaqeyso waana ka fikiri karnaa iibsashadiisa.
Haddii aad isticmaasho Firefox waad heli kartaa Font Finder, taas oo ah kordhin biraawsar aad loo qiimeeyo, qaybta togan ayaa ah taas natiijooyinka si dhakhso leh ayuu noo siinayaa iyo in ay fududahay in la isticmaalo. Waxaan kaloo dooran karnaa MaxaaFontIs, Kani waa mid kamid ah kuwa loogu isticmaalka badanyahay aduunka, kaliya waxaa lagaa rabaa inaad sawir soo dhigato TIF, JPG ama PNG, laakiin waxaad sidoo kale dhigi kartaa URL-ka meesha aad ku aragtay font-ka oo dareenkaaga soo jiitay.
Sidaad u aragtayba, waxaa jira aalado kala duwan oo si fiican noogu adeegi kara markay tahay helitaanka font ama qaab qoraalka aan raadineyno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Qalab lagu raadiyo nooca qoraalka aad raadineysay
Liiska ugu dambeeya ee Midabada Pantone 2017
Cloud Cloud iyo cusbooneysiin cusub oo ku saabsan Photoshop